IMEX: Tsy fotoana tokony hijanonan'ny orinasa izao
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » IMEX: Tsy fotoana tokony hijanonan'ny orinasa izao
IMEX Group dia mampiasa vola amin'ny ekipany miaraka amina fanendrena vaovao 9 rehefa miomana amin'ny IMEX America amin'ity taona ity sy ny IMEX Frankfurt amin'ny 2022.
Ny fiverenana miverina tsaratsara kokoa dia fehezanteny henointsika hatrany hatrany na ao anatiny na ivelan'ny sehatry ny hetsika.
Ao amin'ny IMEX, andraikitra vaovao marobe no noforonina tao anatin'ny orinasa miaraka amin'ny fampiasam-bola lehibe amin'ny rafitra, marketing ary ny endrika.
Ireo andraikitra vaovao ireo dia ampahany amin'ny fanoloran-tenan'ny Vondrona hanangana ny varotra sy tsena manerantany tsara indrindra ho an'ny indostrian'ny hetsika orinasa.
Ny tale jeneralin'ny vondrona IMEX, Carina Bauer, dia nanipika ny maha-zava-dehibe ny fitazonana ny fampiasam-bola mandritra ny toetr'andro sarotra rehefa nilaza izy hoe: "Ny fiverenana miverina tsaratsara kokoa dia fehezanteny henointsika hatrany hatrany na ao anatiny na ivelan'ny sehatry ny hetsika. Miaina izany ao amin'ny vondrona IMEX izahay ary manatsara ny fahaizanay amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny faritra samihafa amin'ny orinasa, manomboka amin'ny fanendrena vaovao manan-danja sy andraikitra vaovao ao anatin'ny orinasa. ”
Andraikitra vaovao maro no noforonina tao anatin'ny orinasa miaraka amin'ny fampiasam-bola lehibe amin'ny rafitra, marketing ary ny endrika. Gary Coombes dia miditra ho Lehiben'ny fampahalalana. COO teo aloha tao amin'ny kaonty Crunch dia niasa tao amin'ny EMAP sy tao amin'ny UBM i Gary izay niasany tamin'ny fahazoana vola amina fisehoan-javatra vaovao, nampitovina tamin'ny Sales sy Marketing manerana ny EMEA. Amin'ny anjara andraikiny vaovao dia napetraka hanangana amin'ny consultancy nomeny ho an'ny vondrona IMEX tamin'ny taon-dasa, ny fitantanana ny fampidirana ny rafitra sy ny fandraisana andraikitra momba ny angona. Hoy i Gary: “Tena faly aho fa hiditra amin'ny IMEX amin'ny fotoana manan-danja ho an'ny orinasa sy ny indostrian'ny hetsika lehibe kokoa. Niasa tao amin'ny indostria nandritra ny androm-piainako aho, tsy andriko ny hahita hetsika mivantana mihetsika. Mahafinaritra ny seho IMEX ary manantena aho fa afaka manampy azy ireo hivoatra, hitombo ary hahomby. ”
Tompon'andraikitra amin'ny paikadin'ny atiny sy ny enti-manana, ny fampandrosoana ny tranonkala ary ny tetik'asa fanovana nomerika, Danielle Colyer dia notendrena ho lohan'ny atiny sy tranonkala. Ny Lehiben'ny votoaty manerantany teo aloha tao amin'ny YNV Group, Danielle dia manana traikefa betsaka amin'ny varotra B2B sy B2C iraisam-pirenena, marika ary tranonkala manana traikefa efa am-polony taona mahery amin'ny famoronana atiny misy fiatraikany ho an'ireo orinasa ao anatin'izany ny Digital Magazine Awards sy ny Study Group. Hoy i Danielle: “Faly be aho miditra amin'ny ekipa IMEX. Ny atiny dia fitaovana matanjaka tsy mampino ao amin'ny fitaovanay marketing ary zavatra tena mandaitra IMEX. Ny tanjoko dia ny hampisondrotra an'ity atiny mamirapiratra ity ao amin'ny tranokalanay iray manontolo mba hahafahany misarika, mampifaly, mampahafantatra - ary amin'ny farany, hampiova fo - ny mpihaino antsika. ”
Ny talen'ny kanto teo aloha tany Grazia UK, Anna Gyseman dia niditra ho Design Manager mifantoka amin'ny famolavolana sary, ny endrika nomerika ary ny làlan'ny marika. Ny fahaizany mamorona dia tsy ho ela dia hanampy amin'ny fanendrena Junior Designer. Hoy i Anna: “Izahay rehetra dia maniry mafy ny fanomezan-toky ny mahazatra, fa amin'ny IMEX kosa dia ekentsika koa ny anjara asantsika amin'ny fitarihana mankany amin'ny tontolo vaovao feno fahasahiana. Ny tanjoko amin'ity taona ity dia ny hanamafisana ny fahatokisan-tena amin'ny marika amin'ny alàlan'ny fampivoarana azy amin'ny fomba vaovao sy vaovao - manome fari-pahaizana mahazatra amin'ny famolavolana famolavolana ary eo am-pikelezana hatrany valiny tany am-boalohany. "
Ny anjara asa vaovao hafa ao anatin'ny Vondrona IMEX dia misy Mpitantana Varotra Senior ao amin'ny ekipa Sales, mpandinika Data ao amin'ny ekipa Event Tech ary mpandalina ara-bola vaovao. Ny ekipa Hosted Buyer dia hampivoitra ny fifantohany amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny fanendrena Mpitantana fifandraisana roa vaovao sy mpitantana ny dia.
Notohizan'i Carina: "Ireo anjara asa vaovao ireo dia ampahany amin'ny fanoloran-tenanay amin'ny fananganana ny varotra sy tsena manerantany tsara indrindra ho an'ny indostrian'ny hetsika orinasa - iraka iray iarahanay tokana. Ho fanampin'izay, izy ireo dia mameno ny fikasanay hamorona tontolon'ny ekipa mahay mandanjalanja sy mailaka kokoa, tohanan'ny mpanolontsaina Jon Barnes izay niresaka momba io fomba fandrosoana io tamin'ny volana febroary. podcast ity. Ny fanakorontanana tamin'ny taon-dasa dia nanosika ireo mpikambana ao amin'ny ekipanay hiala ny faritra mampionona azy ireo, izay matetika mampiseho ny fahaiza-manao izay - ary izy ireo - tsy nahafantatra akory fa nanana izy ireo. Vokatr'izany dia manamboatra endrika ny fikambananay izahay mba hanomezana fahalalahana sy andraikitra bebe kokoa amin'ny tsirairay, hahafahan'izy ireo hitombo, hamirapiratra ary handray anjara lehibe kokoa. ”
“Toy ny fampivoaranay ny seho ataonay mba hamaliana ny filan'ny mpividy sy ny fampirantiana miovaova, ny fomba fiasanay dia mifanaraka ihany koa. Tsy fotoana tokony hijanonan'ny orinasantsika izao. Mino izahay fa zava-dehibe ny manohy mampiasa vola amin'ny talentantsika, ny kolontsainay ary mamorona fotoana vaovao ho an'ny ekipanay mba hitoerana ho mailaka, hamorona ary hamaly ny fiovana eto amin'izao tontolo izao, ”hoy hatrany i Carina. “Ireto Ny fanovana dia hanampy ihany koa rehefa mikasa mialoha ny seho mivantana isika - IMEX America tamin'ny Novambra ary ny tsingerintaona faha-20 nananantsika tany IMEX tany Frankfurt tamin'ny 2022. ”
Amerika IMEX atao ny 9-11 Novambra 2021, ao amin'ny trano vaovao Mandalay Bay any Las Vegas.